Day: Mee 3, 2020
Ministri nke ime obodo ekwuputala 31 na njem iwu agbatịkwuru maka ụbọchị ọzọ
Mpaghara 18.04.2020 nwere ọnọdụ mepere emepe (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, ndị nwere okirikiri akpọrọ "Ntinye Obodo, Ntinye Ọpụpụ" zigara ndị gọvanọ 81 nke ọchịchị na 30. [More ...]
Ike Samsun Sivas Railway Line ikike ga-abawanye pasent 50
Minista na-ahụ maka njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na ọrụ ndị ahụ n'okporo ụzọ okporo ụzọ Samsun-Sivas, bụ nke emechiri n'ihi nrụzigharị na ndozigharị ọhụrụ na 29 Septemba 2015, abatala. Ihe owuwu a malitere n'afọ ndị mbụ nke Republic na [More ...]
Etemeete maka Schoolslọ Akwụkwọ na Njefe Ankara
Ọ bụ ezie na obodo Ankara na-aga n'ihu na akụrụngwa akụrụngwa ya, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ndị ahụ ga-eme ka obodo ahụ maa mma ma leba anya na ihe ngosi obodo. N’ogho chọrọ mmezi, ndozi na eserese n’ogbe na mpaghara [More ...]
Ndokwa na-aru oru maka mmebi ihe ojoo mgbe Konya no na ulo
Obodo Konya na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ụzọ gafere ụzọ na ụzọ ọ ga-ezumike. Imecha nhazi nke ọtụtụ okporo ụzọ na mgbochi mmachi n’izu ndị gara aga iji belata okporo ụzọ obodo. [More ...]
Asọtọtọtọtọtọtọtọtọtọ na ngbutala ụzọ Izmit Seka
Obodo Kocaeli, nke mejuputara ọtụtụ ọrụ ụgbọ njem dị mkpa n'ime afọ iri na isii gara aga, na-eme ka ụgbọ njem dịkwuo mfe n'okporo ụzọ, mkpagharị na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ngalaba Science Science na Izmit district [More ...]
Dọkịta Hotline gara n’ihu na-akọwara ndị Izmiel
Line Doctor Advisory Line, nke ndi Izmir Metropolitan Obodo nyere ya iji gbochie njupụta nke ụlọ ọgwụ n'oge ụbọchị ọrịa na-eduzi ma na-eduzi ndị Izmirị ndị nwere nsogbu ịbịakwute dọkịta, na-aga n'ihu na-agwa ndị Izmir. Ndị bi na Izmir nwere afọ ojuju maka ngwa a. Obodo Izmir [More ...]
Transport na Infrastructure Minister Karaismailoğlu Fair, nke bụ otu n'ime Turkey mbụ ụgbọ okporo ígwè akara na mgbe na-eje ozi 1932 afọ nke ije ozi na Samsun-Sivas Oké ụgbọ okporo ígwè akara meghere na 83 ka ime nke ugbua September 29, 2015 [More ...]
Aga-eme Nnukwu Exercisewa Ahụ Na-ahụ Maka valwa Nke Na-agaghị Eke Ekepera Na COVID-19
Ndị agha mmiri nke United States ekwuputala na ọ ga-agbasi mbọ ike na Mmega Ahụhụ Osimiri Pacific nke 27 (RIMPAC), mana a ga-eme mmemme nke afọ a site na 17 ruo 31 August, a ga - eme ya n'ụzọ dị obere n'ihi coronavirus. US [More ...]
N'ime arụ ọrụ nke otu ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa na ahia na Istanbul Muratbey Customs, masịrị 760 puku masks, 1 nde 310 puku gloves na 8 200 [More ...]
Mkpebi dị n'etiti ndị dike nke ụgbọ elu, American Boeing na Brazil Embraer, iji mepụta njikọta ọnụ bụ mkpebi Boeing kwụsịrị. American Boeing ya na ụlọ ọrụ Embraer Brazil, nke atọ na-emepụta ụgbọ elu ụwa atọ kachasị elu n'ụwa [More ...]
Nkwupụta nke General Directorate nke Highways jikọrọ na Minista ofgbọ njem na akụrụngwa, ekwuputara na enwere nnukwu okporo ụzọ n'okporo ụzọ TEM na njikọ okporo ụzọ dị n'etiti Kavacık Junction-Mahmutbey West Junction-Kınalı Junction. [More ...]
A ga-emechi okporo ụzọ gafee usoro nke atọ Rail System Project na Meltem
N'ime usoro Antalya Metropolitan Municipal 3rd Stage Rail System Project, akụkụ nke Meltem Boulevard dị n'etiti İsmail Baha Sürelsan Caddesi na Tarık Akıltopu Caddesi ga-emechi emechi na Mọnde, Mee 4. Meltem Boulevard [More ...]
Ndị bi na Istanbul na-aga n'ihu n'okporo ụzọ IMM ha mgbe ha nọ n'ụlọ
İBB na-agba mbọ iji zuru ike njem site na ijikọ Giyimkent Avenue na TEM Yanyo. Azụchapụtala 86% nke ihe ndị a na-egwupụta n'okporo ụzọ njikọ ya na ebe ngbanye. Otu IMM na-erite uru na oge ọ bụla n'ihi njupụta okporo ụzọ [More ...]
Ọpụpụ Covid 19 na Rail Freight Transport
Na mba anyị, naanị pasenti 4 nke ngụkọta ụgbọ mmiri bụ nke a na-eji ụgbọ okporo ígwè eme. O doro anya na òkè nke ọrịa na-efe efe site na mba ofesi buru ibu na mgbasa nke ọrịa ndị a. Ebe ọ bụ na enwebeghị ụzọ ụgbọ okporo ígwè n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri, ibu na-abịa n'ọdụ ụgbọ mmiri anyị, [More ...]
Serap Timur ka a raara aka na thelọ Ọrụ Rail System Proutions Direction na IMA
Obodo Obodo ukwu nke Istanbul ahọpụtala Serap Timur, onye rụrụ ọrụ dị ka onye na-esote onye isi mpaghara na DLH, kama Aslı Şahin Akyol, Onye Njikwa Rail System Projects Manager, onye ọ chụrụ na nso nso a. gara aga [More ...]
Taa na akụkọ ihe mere eme: 3 May 1873 Haydarpasa-Izmit railway
Taa na History 3 Mee 1873 Haydarpaşa-Izmit okporo ụzọ banyere ọrụ na Izmit na mmemme nke Grand Vizier Rüştü Pasha dị njikere. E wuru eriri iri-asaa na asaa n’ime afọ abụọ. 91 Mee 2 Maraş-Köprüağzı ntọala njikọ ntọala [More ...]